Kingston Stanley | Kedu otu esi esi pụta ma nweta CV gị?
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at Nwere ike 19, 2019
Kingston Stanley na ụlọ ọrụ Dubai City
Kingston Stanley - Olee otú ị ga-esi pụọ ma nweta CV gị?
Kingston Stanley - Maka ndị niile a na-aga ime mmụọ na-adọga inweta azịza, ma ọ bụ Ajụjụ ọnụ site na ngwa ọrụ, lee usoro ole nwere ike inye aka.
Cheta ahịrị manager, Onye na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ ma ọ bụ onye na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ a na-enwekarị narị narị CV kwa ụbọchị. Mwute, ọtutu ndi nhoputa nwere ụzọ “ikposa ihe” iji were n'ọrụ ma ziga CV ha n'ọrụ ọ bụla, ọbụlagodi ma ha adaghị na ụgwọ ahụ. Aga m adụ gị ọdụ ka ị mee ihe ndị a:
Naanị zitere CV gị ka ị rụọ ọrụ ị dabara kpam kpam, n'okwu nke asusu, Ahụhụ ngalaba na afọ nke ahụmịhe.
Gụchaa mgbasa ozi niile ma hụ na ị kwadoro igbe niile.
Ụlọ ọrụ nchịkọta ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpa ọhụụ banyere ụlọ ọrụ dị mkpa, ebe onye ahịa ha ga na-akwụ ụgwọ maka otu egwuregwu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwuo ọrụ, mee ya na ụlọ ọrụ yiri nke a, ma ọ bụ gaa kpọmkwem na ụlọ ọrụ (ọ bụghị site na ụlọọrụ).
Ozugbo i zigasiri CV ka onye were gị n'ọrụ, gbalịa igosipụta onye njikwa ego bụ ma hụ ma ị ga - enwe obere mkparịta ụka nkeji oge 5 gbasara profaịlụ gị.
Debe ebe ezigara CV gị, debe aha ma maa ahịa gị na ya ndepụta nke ndị were gị n'ọrụ.
Gaa ihe omume netwọkụ dịka Dubai Lynx, MEPRA, Cityscape, Gitex, Market Travel Market ma zute ndị na-eme mkpebi ozugbo. Ihu ihu kacha mma mgbe niile.
N'ikpeazụ, akụkụ kasị sie ike nke usoro nyocha bụ ịme ajụjụ ahụ. Mgbe a na-ede akwụkwọ a iji jide n'aka na ị na-eji oge na-akwadebe ma ọ bụghị na ị ga-emegharị n'emeghị nyocha gị.
Gaa Kingston Stanley
Anyị nwekwara ike ịnye ndụmọdụ mgbe ị na-eme nyocha
Cheta ime nnyocha gị na ụlọ ọrụ ahụ. Gụọ akụkụ 'About Us' nke weebụsaịtị ma jiri ozi a mgbe ị na-ekwu okwu banyere ihe kpatara ya ị ga-achọ ịrụrụ ha ọrụ. Agwula na ichoro oru ka otutu, nnukwu ulo oru ma obu obere mmalite. Mee azịza gị SPECIFIC nye onye ahịa ya. Lelee profaịlụ ụlọ ọrụ na Wikipedia, dị ka nke a ga - agwa gị nza ịchọrọ ịma gbasara ha.
Buru na oge
Na-abịa oge maka ajụjụ ọnụ. N'oge pụtara oge nkeji ise ruo iri tupu oge eruo. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, were obere oge iji gaa ebe a na-agba ajụjụ ọnụ tupu oge eruo ka ị mara ebe ị na-aga, yana ogologo oge ọ ga-aga ebe ahụ.
Ejiji maka Nlekọta Ajụjụ Ọnụ
Jide n'aka na ị na-eji ejiji kwesịrị ekwesị maka ọganihu Ajụjụ Echiche mbu ị na-eme n’ebe onye were gị n'ọrụ nwere ike ime nnukwu mgbanwe. Ikpe mbụ onye na-agba ajụjụ ọnụ na-eme a ga-ekpebi etu ị dị, na ihe ị na-eyi. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa mgbe niile iji ejiji dị mma maka ajụjụ ọnụ maka ajụjụ ọnụ.
Ajụjụ iji kwadebe maka:
1. Kedu ihe ị maara gbasara ụlọ ọrụ ahụ? - Olee mgbe e hiwere ha, ọnọdụ ọfịs zuru ụwa ọnụ, ndị ọrụ headcount wdg
2. Kedu ihe masịrị gị maka ọrụ a? - Ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume hụ na ị maara ọrụ sitere na nkọwa ọrụ ahụ
3. Gwa m banyere onwe gị - Ajụjụ a pụtara "nye m nkọwa sara mbara nke onye ị bụ, na-ekwu okwu n'ụzọ ọrụ, tupu anyị agbanye nkọwa."
4. Gịnị mere anyị ga-eji were goro gị ọrụ? - Chee echiche banyere ahụmihe gị / ike gị nwere
5. Kedu ihe bụ isi gị na ike gị? Nwee otu ihe atụ maka nke ọ bụla.
6. Gini bu ebum n’uche gi? - Nwee ezi ọnọdụ /ọrụ n'uche
7. Kedu ihe kpatara ị na-ahapụ ọrụ gị ugbu a?
8. Kedu ka ị si edozi nsogbu ahụ? - Kwuo banyere otu ị si ebute ọrụ gị.
9. Kedu ihe ndị ị na-atụ anya ụgwọ?
10. Kedu ajụjụ ị nwere maka anyị?
Ekwula ihe niile ị ga-eme. Na-ekwu maka ike 1 ma ọ bụ 2 ike - nke ahụ dabara na ọnọdụ - ma kwado ya Ihe atụ. N'okpuru bụ ụfọdụ echiche maka gị;
1. Enwere m ọmarịcha nka ederede. M na-eme ka iwepụta akwụkwọ akụkọ maka ndị ahịa oge niile atụmatụ ịre ahia maka ndị isi m, na obere ngosi.
2. Abụ m ezigbo onye nkwukọrịta ma nwee ike ịsụ asụsụ Arabik na Bekee nke ọma, nwee ahụmịhe gara aga na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndi otu di iche iche na ndi n’aru nke oma.
Ịgwa adịghị ike gị bụ ajụjụ aghụghọ. N'ajụjụ ọnụ kwesịrị AHỤ mee ihe oma na obere ntule. Cheta ịgbalị ime ka adịghị ike gị bụrụ nke dị ike.
1. Enwere m ọchịchọ ikwu 'ee' ọtụtụ Ọrụ batara n'ahụ m ma m na-ejidekwa onwe m n'ọfịs ruo mgbe arụchaala ọrụ ahụ, ọ bụrụgodi na ọ bụghị ọrụ dịịrị m.
DỊ mKPA: Na njedebe nke adịghị ike ọgwụgwụ na ihe ziri ezi.
Ajụjụ ị nwere ike ịjụ ha
Na njedebe nke ajụjụ ọnụ ahụ, jụọ ajụjụ ole na ole iji wulite onye gbara ya ajụjụ ọnụ, dị ka;
1. Kedu ihe ị masịrị gị banyere ụlọ ọrụ ahụ?
2. Kedu ụdị njikwa ya, ma ọ bụ omenala ọfịs?
3. Mmadụ ole n'ime otu?
Kọwaa usoro ahụ
Onwere ihe ichoro ka m juo ozo? Kedu ihe ndị ọzọ ga-eme?
Banyere Kingston Stanley
Kingston Stanley bu onye isi di egwu di egwu, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị ahịa na teknụzụ dị na Middle East na UK, na-arụ ọrụ naanị ndị ahịa na ndị mmeri n'obere ahịa ahụ zuru oke, ngalaba dijitalụ na teknụzụ kemgbe mbido 2011.
Anyị ga - enyere gị aka ịchọta, nyochaa ma họrọ ezigbo onye maka gị ngwa ahịa na teknụzụ jikọtara ọnụ, anyị nwekwara ndị netwọk kachasị, nke kachasị ugbu a na nke ruru eru maka ndị ruru eru. Ma ị nwere ọrụ nke chọrọ ka a jupụta gị ngwa ngwa ma ọ bụ na-ere akwụkwọ na-egbu egbu, i gha ahu ihe icho icho. Omume siri ike, ịkwụwa aka ọtọ, ikwesị ntụkwasị obi na ịrụ ọrụ na ebumnuche bụ ogidi anọ nke anyị azụmahịa nke a gosipụtara ụdị anyị, ndị ọrụ anyị na ndị anyị na-anọchite anya ya.
Ụlọ ọrụ Dubai City ugbu a na-enye ezigbo nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.